भान्सा कोठामा भूलेर पनि नराख्नुहोस् यी चीज, नत्र रिसाउँछिन् माता अन्नपूर्ण – News Nepali Dainik
भान्सा कोठामा भूलेर पनि नराख्नुहोस् यी चीज, नत्र रिसाउँछिन् माता अन्नपूर्ण
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २७, २०७८ समय: ५:४३:०२
आजको समयमा, प्रत्येक व्यक्तिको घरमा एउटा भान्छा कोठा हुन्छ नै, किनभने पहिलेको समयमा मानिसहरू खुला आँगनमा माटो वा ढुङ्गाको चुला बनाइर खाना पकाउँथे। यद्यपि, आज पनि प्रायः गाउँहरूमा माटोको र ढुङ्गाको चुलामा नै खाना बनाइन्छ। जहाँसम्म, हामी आजको आधुनिक भान्छाको बारेमा कुरा गर्दैछौं।
घरको भान्छा घर एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान हो। सबै प्रकारका भाँडाहरु भान्छा घर राखिन्छन्। तर के तपाईंलाई थाहा छ ? वास्तुशास्त्रमा भान्साको बारेमा केहि नियमहरू छन्, आउनुहोस् जानौँ कुन चीज भान्सामा राख्नु हुँदैन त ?
यी चीजहरूलाई कहिल्यै पनि भान्छामा नराख्नुहोस्
सामान्यतया देखिन्छ कि मानिसहरूले भान्सामा खाली वस्तुहरू राख्दछन्, जुन प्रयोग गर्दैनन्। वास्तुशास्त्रमा यस्ता बेकारका चीजहरू जुन प्रयोग भइरहेको छैन, ती चीजहरू कुनै पनि कुनामा राख्नु हुँदैन। त्यसो गर्नाले दोष लाग्छ र माता अन्नपूर्णा रिसाउँछिन्।
किचनमा भुलेर पनि नराख्नुहोस् ऐना
यस बाहेक,भुलेर पनि किचनमा ऐना नराख्नुहोस् किनभने त्यसो गर्नाले तपाईंको जीवनमा समस्याहरू बढाउन सक्छ। वास्तुशास्त्रको नियम अनुसार भान्सामा सिसा प्रयोग गर्नाले स्टोभ/ आगोको प्रतिबिम्ब हुन्छ, जुन सही मानिदैन। यो भन्नुको मतलब ऐना भान्छाबाट टाढा राख्नुहोस्।
वास्तु अनुसार औषधी किचनमा नराख्नुहोस्
धेरै जसो यो देखिन्छ कि धेरै मानिसहरू भान्सामा औषधी राख्छन्। जसलाई बिर्सनु हुँदैन। वास्तुका अनुसार यो विश्वास छ कि भान्साकोठामा औषधी राख्दा घरका कुनै सदस्य बिरामी पर्न सक्छ। साथै घरमा नकारात्मक उर्जाको प्रवाह बढ्नेछ। त्यसकारण औषधी भान्छाको कुनै पनि ठाउँमा भण्डार गर्नु हुँदैन।
सिसाको भाडामा पुरानो नुन नराख्नुहोस्
सिसाको भाँडामा नुन भर्नुहोस् र यसलाई भान्छामा राख्नुहोस्। वास्तु भन्छन्, कि नुनले नकारात्मक उर्जा ग्रहण गर्छ र यसले घरको वातावरणलाई सकरात्मक उर्जाले भर्दछ। जे होस्, समय-समयमा यस नुनलाई बदल्नुहोस्। पुरानो नुनलाई पानीमा राख्नुहोस् र फेरि शुद्ध नुनले भर्नुहोस्।
बासी खाना कहिल्यै पनि फ्रिजमा नराख्नुहोस्
भान्सा घरमा पकाउने धेरै व्यक्तिले दुई वा तीन दिनसम्म पकाएको बासी खाना फ्रिजमा राख्छन्, जुन गलत हो। फ्रिजमा बासी खाना राख्दा राहु-केतु र शनिको दोष हुन्छ। त्यसैले ताजा खाना सधैं फ्रिजमा राख्नुपर्दछ। यो सँगै, तपाईं पनि बेघरबाट सुरक्षित हुनेछ र स्वास्थ्य पनि धेरै राम्रो हुनेछ।
Last Updated on: June 10th, 2021 at 5:43 am